bull market(bull market) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
राजनीतिक अस्थिरतालाई चिर्दै बजार बुम, १० कम्पनीमा पोजिटिभ सर्किट
काठमाण्डौ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाट उत्पन्न त्रासलाई चिर्दै बजारमा मंगलबार उछाल आएको छ। राजनीतिक उथुलपुथलबीच हिजोबाट लयमा फर्किएको बजारले आज बेजोडको गति लिएको हो। आज नेप्से परिसूचक ९५.४६ अंकले बढेर २०६१.४१ को उचाइमा पुगेको हो। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि १५.१८ अंकले बढेर ३९१.७४ को विन्दुमा उक्लिएको...
राजनीतिक उथलपुथलबीच बजार बाउन्सब्याक, एनआइसी एशियाको मूल्यमा उछाल
काठमाण्डौ । संसद् विघटनपछि उथलपुथल बनेको राजनीतिक परिस्थितिबीच आज सोमबार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले बढेको छ । आज परिसूचक ३०.३३ अंकले उकालो लाग्दै १९६५.९६ को विन्दुमा उक्लिएको छ। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ७.०१ अंकको बढोत्तरीका साथ ३७६.५६ को उचाइमा पुगेको छ। आज परिसूचक दोहोरो अंकले बढे पनि...
काठमाण्डौ । बजार घटाउने सबैतिरको चलखेल र प्रयास सफल नभएसँगै नेप्से परिसूचकमा फेरि तीव्र बढोत्तरीको यात्रा सुरु भएको छ । लगानीकर्तामा उच्च मनोबल रहेका कारण नेप्से परिसूचक आज एकैदिन भारी अंकले बढेर २१ सय विन्दू नजिक पुगेको छ । साताको चौथो दिन आज बुधबार नेप्से परिसूचक ७०.६२ अंकले बढेर २०७१.०३ विन्दू कायम भएको हो । परिसूचक १८८१ विन्दू...
काठमाण्डौ । सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक झिनो अंकले बढेको छ, तर कारोबार रकम भने ह्वात्तै घटेको छ । आज नेप्से परिसूचक ३.३५ अंकले बढेर २०००.४० विन्दूमा पुग्यो भने कारोबार रकम करिब साढे ७ अर्बमा सीमित भयो । बुलिस ट्रेण्डमा कुदिरहेको बजारमा हिजो सोमबार अपरान्ह नेपाल धितोपत्र बोर्डले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बढ्दो बजारमा हल्ला र...
सेयर बजारमा कीर्तिमानै कीर्तिमान, इण्डेक्स र टर्नओभरले रचे इतिहास
काठमाण्डौ । नेपालको सेयर बजारले बिहीबार(आज) कीर्तिमानै कीर्तिमान कायम गरेको छ । नेप्से परिसूचकले ४ वर्षअघिको अलटाइम हाई १८८१.४५ को विन्दूलाई ब्रेक गरी नयाँ उचाई चुमेको छ भने कारोबार रकममा पनि आज कीर्तिमान कायम भएको छ । यस्तै यो दिन दैनिक कारोबार संख्यामा समेत नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ । बुलिस बजारमा यो दिन बैंकिंग समूहको उपसूचकमा...
नेप्सेको आकारमा एकैदिन रु. ८७.२३ अर्बको छलाङ, कारोबार कित्तामा पनि कीर्तिमान
काठमाण्डौ । सेयर बजारको आकारले आइतबार फेरि नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । बैंकिंग समूहमा उछाल आएको यो दिन कारोबार रकममा नयाँ कीर्तिमान हो । यो दिन कुल बजार पूँजीकरण २५ खर्ब १३ अर्ब १५ करोड माथि पुगेको हो । यसअघि मंगलबार नेप्सेको कुल बजार पूँजीकरण २४ खर्ब २६ अर्ब २ करोडमा सीमित थियो । यसको अर्थ अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा बुधबार एकैदिन बजार...
बैंकिङ समूहमा उछाल आएसँगै नेप्से अलटाइम हाईनजिक, प्रवृति जारी रहे १९०० पार गर्ने प्रक्षेपण
काठमाण्डौ । बैंकिङ समूहमा उछाल आउन सुरु भएसँगै सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक अलटाइम हाई नजिक पुगेको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी हिस्सा बैंकिङ समूहले ओगटेको छ । यो समूहमा भर्खर उछाल सुरु हुन थाल्दा नै नेप्से परिसूचक अलटाइम हाईको विन्दूभन्दा ६ अंक मात्र कमको उचाईमा पुगेपछि आगामी दिनमा अझ माथि पुग्ने संभावना देखिएको छ । 'बैंकिङ समूहको...
नेप्से अलटाइम हाई नजिक, ७ कम्पनीमा सर्किट
काठमाण्डौ । सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक अलटाइम हाई नजिक पुगेको छ । पूर्व अनुमानअनुसार नै आज कारोबारको सुरुवातदेखि नै बजारमा निकै राम्रो हिस्सा रहेको बैंकिंग समूहको उपसूचकमा उछाल आएसँगै समग्र बजार परिसूचकमा पनि उछालकै अवस्था देखिएको हो । दिउँसो १ बजेसम्ममा नेप्से परिसूचक ४७ अंकले बढेर १८५७ को विन्दूमा पुगिसकेको छ । नेप्सेको...
बैंकिङमा उछाल आए नेप्सेले भोलि नै अलटाइम हाई ब्रेक गर्ने सम्भावना !
काठमाण्डौ । धितोपत्र कारोबारको तेस्रो दिन आज मंगलबार नेप्से परिसूचकमा आएको दोहोरो अंकको उछालसँगै १८०० विन्दु माथि उक्लिएको छ। आज कारोबार रकम साढे ५ अर्ब हाराहारीमा भएको छ। आज परिसूचक २९.६८ अंकले उकालो लाग्दै १८१०.११ को विन्दुमा पुगेको हो। यो चार वर्षयताकै उच्च पनि हो। यस्तै राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि...
चुचुरो चुम्नुअघि थकाई मार्दै नेप्से, बैंकिङ समूहतर्फ उछाल आई अलटाइम हाई ब्रेक हुने प्रक्षेपण
काठमाण्डौ । बजारमा झिनो करेक्सन आएको छ । योसँगै कारोबार रकम पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेको छ । यो दिन बजारमा पौन ५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिन(आइतबार) झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँको सेयर एकैदिन किनबेच भएको थियो । अघिल्ला सातादेखि नियमित बढेको बजारमा अधिकांश कम्पनीहरुमा बिक्री चाप आएका कारण बजारले सानो करेक्सन...
बजारमा उछाल आउँदा १५ कम्पनीका लगानीकर्ताले पैसा छापे, आगामी साता नेप्से १८०० माथि पुग्ने प्रक्षेपण
काठमाण्डौ । नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अंकको भारी वृद्धिसँगै परिसूचक १८०० विन्दू नजिक पुगेको छ । नेप्से परिसूचकमा उछालको गति हेर्दा यस्तो लाग्छ, अलटाइम हाई १८८१ ब्रेक हुन अब धेरै दिन लाग्ने छैन । लगानीकर्तामा पनि यही विश्वास देखिन्छ । सेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज बिहीबार नेप्से परिसूचक ३६.३२ अंकले बढेर १७७८.१३ विन्दूमा पुगेको...
काठमाण्डौ । दशैंको माहौलले छोए पनि बजारमा आज दोहोरो अंकको बढोत्तरी भएको छ । दशैं खर्च जोहो गर्ने उद्देश्यले लगानीकर्ताले पछिल्लो समय सेयर बिक्रीको चाप बढाउँदा बजारमा लगातार झिनो अंकको गिरावट आइरहेको थियो । तर, आजको बजार बढोत्तरीले बजारमा केही थोरै संख्यामा सक्रिय रहेका लगानीकर्ताले सेयरको खरीद चाप बढाउन थालेको देखिएको छ । यो दिन...
'सुनियोजित पहिरो'लाई पन्छाउँदै बजारमा बाउन्स ब्याक, लघुवित्तको मूल्यमा पहिरो
काठमाण्डौ । सुनियोजित ढंगले पहिरो झारिएको बजारमा मंगलबारदेखि पुनः बढोत्तरीको यात्रा सुरु भएको छ । सोमबार सुनियोजित रुपमा ‘भीषण पहिरो झारिए’पछि बजार धेरै घटेर निर्धारित समयअघि नै बन्द गर्नुपरेको थियो । यो क्रममा नेप्सेका सबै समूहको उपसूचकमा भीषण गिरावट आएको थियो । यो खेलकै कारण हजारौं लगानीकर्ताले एकैदिन करोडौं सम्पत्ति गुमाउन...